Ny smartwatch an'ny Oppo dia voasivana amin'ny alàlan'ny Google Wear OS | Androidsis
Manintona tokoa ny tsenan'ny smartwatch, ka izany no anombohana fitaovana vaovao misy fanatsarana lehibe. Ny iray amin'ireo teboka tsara dia ny fizakan-tena, ny zava-drehetra dia mitranga amin'ny alàlan'ny fampidirana bateria lithium ampy haharetana antsika andro maromaro ampiasaina.
Oppo te-hiditra amin'ny lalao amin'ny alàlan'ny fandefasana ny rindrambaiko manokanaRehefa avy nahalala topi-maso an'ity vokatra ity tokony ho 10 andro lasa izay. Ankehitriny dia misy sary vaovao an'ity smartwatch ity izay miasa indray miaraka amin'ny rafitra fiasan'ny Wear OS an'ny Google, noho izany dia ariana ny interface manokana ataon'ny orinasa.
Ho tonga miaraka amin'ny Find X2 izy ity
La fahatongavan'ireo isa marani-tsaina amin'ny 6 martsa, mifanindry amin'ny fanombohana ny Oppo Find X2, iray amin'ireo finday finday avo lenta izay mampanantena zavatra betsaka momba ny endriny efa fantatra hatreto. Hivoaka any Chine ny telefaona amin'ny 6 martsa, ka tsy dia misy ambiny firy ny fanambarana azy roa.
Amin'ny sary voalohany dia aseho ny famantaranandro miendrika toradroa, eo amin'ny ilany ankavanana dia manampy bokotra roa izy io, ny iray kosa asehon'ny filoha lefitry ny orinasa, Brian Shen. Izy ireo dia hampiasaina amin'ny fitetezana ao anatin'ny menio Google Wear OS.
Ny sary nomen'i Ben Geskin dia manome antsipiriany, ao anatin'izany ny efijery fitaratra miolakolaka, dia vera 3D miaro ny efijery AMOLED ary avo noho ny famantaranandro hafa io. Manjary mainty tanteraka ny loko, na dia tsy manilika aza izy fa tonga amin'ny loko hafa aorian'ny volana.
Ny smartpatch Oppo dia mampiseho ny menio fanovana izay ahitantsika ny safidy bokotra multifunction, bateria, teny miafina ary maro hafa. Ny fantatra dia hisy fehin-kibo tsy voatery, rehefa avy nanoro hevitra azy i Shen taorian'ny nanontanian'ny mpampiasa maro ny tambajotra sosialy Weibo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Fivoahan'ny smartwatch an'i Oppo amin'ny alàlan'ny Google Wear OS
Black Desert Mobile dia mandray ny fiakarana amin'ny kilasy